Mandrara Ny Mpikambana Ao Aminy Tsy Hankalaza Ny Krismasy, Izay Nofaritana Ho Fetin’ny Fahafaham-baraka Ny Antoko Komonista Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2018 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Türkçe, Ελληνικά, English
Hetsi-panoherana manohitra ny Krismasy tamin'ny taona 2014. Sary tao amin'ny Chine Nouvelle, faritra an'ny Fanjakana Shinoa .
Namoaka fanambarana mandràra ny mpikambana ao aminy mba tsy hankalaza ny fetin'ny Tandrefana toy ny : Andron'ny Mpifankatia, Paska, ny Fetin'ny Lainga, ny Halloween ary vao haingana ny Krismasy ny biraom-paritany ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa. Nampilazaina ihany koa ny fampahalalam-baovao mba tsy hitatitra vaovao momba ny Krismasy raha vao hiandoha ny fety, fankalazana izay inoan'ny antoko fa mampatsiahy ny fanalam-baraka an'i Shina ara-tantara avy Amin'ny Tandrefana.
Folo taona lasa izay no nipoiran'ny hetsi-panoherana manohitra ny fetin'ny Tandrefana ary notarihan'ny vondrona manam-pahaizana Confucian amin'izao fotoana izao izay manohitra ny “Fiparitahan'ny kolontsaina tandrefana”. Vao haingana, no nanaiky ity hevitra ity ho toy ny fanavaozana ara-kolontsaina nasionaly ny Filoha Shinoa Xi Jinping.
Tamin'ny volana Janoary 2017, namoaka fanambarana lehibe iray mitondra ny lohateny hoe “Soso-kevitra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa hampiroboroboana sy hampandrosoana ny hatsaran'ny kolontsaina Shinoa nentim-paharazana” ny Biraon'ny Komity foibe ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa sy ny Filankevi-panjakana. Manoritsoritra tetikasam-panavaozana ara-kolontsaina izay mampifanaraka ny soatoavin'i Confucius miaraka amin'ny rafitra politika amin'ny antoko tokana ny fanambarana, izany dia natao mba hanarenana indray ny rehareha ara-kolontsain'ny vahoaka Shinoa.
Tamin'ny taona 2017, nomarihana tamin'ny alàlan'ny famoahana lahatsoratra iray izay manolotra ny tantaran'ny fanafihan'ny tafika tandrefana tany Shina nandritra ny Ady Lehibe Voalohany sy Faharoa ny hetsika fanoherana ny Krismasy, ary milaza fa fety izay maneho ny fahafaham-baraka Shinoa ny Krismasy .
Mamaritra ny fankalazana ny Krismasy ho toy ny fanao ara-pivavahana ilay lahatsoratra :
Nankalazain'ireo tanora Shinoa noho ny toetra ara-kolontsaina tsy mahazatra azy ireo ny alin'ny Krismasy sy ny Andro Krismasy, miaraka amin'ireo fety tandrefana hafa manana lanjany ara-pinoana. Natao ihany koa ny fety noho ny fanentanana nataon'ny olona sasany sy ny fikambanana. Manampy amin'ny fampiroboroboana ity fotoana mahafinaritra ity mba hisarihana ny mpanjifa ihany koa ny sehatry ny fihariana. Nihamafy kokoa ny fiantraikan'ny fety tandrefana amin'ny fiarahamonina raha tsy dia nisongadina loatra ny fetim-pirenena.
Fantatra araka izany fa mankafy kokoa ny fanarahana ny kolontsaiana tsy nentim-paharazana sy malaza ny tanora ary mitady vola amin'ny alàlan'ny fetin'ny tandrefana ny sehatry ny fihariana. Kanefa tsy tokony hanaraka ity fironana ity ny mpikambana ao amin'ny Antoko Komonista Shinoa (AKS) sy ny manampahefana satria resaka finoana sy fanao ara-politika izany.
Manana tantara ara-pinoana ireo fety tandrefana rehetra ireo ary tokony heverina ho anisan'ny fanao ara-pivavahana.
Nanamafy ihany koa ny lahatsoratra fa endrika fibahanana ara-kolontsaina ny lazan'ny fety Tandrefana izay tsy tokony handraisan'ny mpikambana ao amin'ny AKS anjara .
Mitongilana ny finoany raha mankalaza ny fety ara-pivavahana ny tsy mpino an'Andriamanitra. Ankoatra izany, mampiseho ny lanjan'ny kolontsaina nasionaly ny fety. Manana ny lova ara-kolontsainy izay mampivondrona ny firenena ny tondrom-pirenena tsirairay avy .
Raha mankafy ny fankalazana ny fetin'ny firenena hafa ny tondrom-pirenena iray dia manondro ny fihanaky ny kolontsaina lehibe izany tranga izany. Very ny fahatsapany ara-politika sy ny fomba fijeriny ny fandrosoana raha tsy mahatsikaritra izany ny mpikambana ao amin'ny antoko sy ny manampahefana.
Mampahatsiahy ny tantaran'ny Firenena Valo Mpiaradia ny lahatsoratra mba hilazana fa fety fanalam-baraka ho an'ny Shinoa ny Krismasy. Natsangana ho setrin'ny hetsiky ny Boxers tamin'ny taona 1899-1900 tany Shina ny miaramila mpiaradia iraisam-pirenena . Raha notohanan'ny governemanta Qing, nanafika sy namono ireo misiônera vahiny, ireo olom-pirenena sy ireo Kristiana Shinoa tany avaratr'i Shina ny Boxers. Nitarika ny fanafihana, ny fibodoana ary ny fandrobana tao Beijing tamin'ny taona 1900 ny fifandonana .
Any ivelan'i Japana, manana ny finoana Kristiana ho fivavaham-pirenena ny firenena rehetra. […] Nomarihana tamin'ny teny hoe “fahafaham-baraka” ny fielezan'ny finoana Kristiana ao Shina nandritra ny ady. Fety ankalazan'ny Kristiana ny Krismasy ary midika ratra ho an'ny vahoaka Shinoa izany. Tsy mety amin'ny vahoaka Shinoa izany, tsy tokony hohadinointsika ny tantara manala baraka ny firenentsika.
Nilaza ny Mpikambana maro fa nahazo filazana avy amin'ny sampana AKS tany amin'ny oniversite na ny orinasam-panjakana izy ireo mampahalala fa tsy tokony handray anjara amin'ny fankalazana ny Krismasy izy ireo. Tao amin'ny Twitter, nizara vaovao momba ny fandraràn'ny AKS ny fankalazana ny fety Tandrefana i @szshu:
Nanoratra tao amin'ny Weibo tamin'ny 17 Desambra ny Ligin'ny Tanora Komonista (CYL) ao Anhui fa tokony ho raisina ho toy ny fety manala baraka ny Shinoa ny Krismasy noho ny tantaran'ny fanafihana Tandrefana. Maro ireo manampahefana no nandrara ny mpikambana ao amin'ny AKS tsy hankalaza ny fety Tandrefana. Tao Hengyang, Hunan, nandrara ny mpikambana sy ny manampahefana ary ny fianakavian'izy ireo ny Departemanta mifehy ny AKS mba tsy hanatrika ny fetin'ny Krismasy .
Nahazo torolàlana sivana ihany koa ny fampahalalam-baovao tao an-toerana. Araka ny China Digital Times, ny torolàlana milaza hoe:
Tsy tokony hitatitra ny vaovao momba ny Krismasy ny fampitam-baovao. Tsy tokony handefa hafatra mifandraika amin'ny lohahevitra momba ny “fialantsasatra any ivelany” ireo tranonkalam-baovao amin'ny sehatra rehetra. (22 Desambra 2017)
Tao amin'ny Weibo, iray amin'ireo sehatry ny media sosialy malaza indrindra ao Shina, niombon-kevitra tamin'ny fandraràna ny Krismasy nataon'ny AKS ny mpisera sasany.
Nandritra ny telopolo taona nanaraka ny fanovàna goavana tany amin'ny Firaisana Sovietika sy tany Eoropa Atsinanana, nikasa ny fanovàna [mandeha tsikelikely] am-pilaminana tao Shina ny ideolojia tandrefana notarihin'i Etazonia, toy ny mahandro sahona ao anaty rano mangotraka. Resy tamin'ny ady ideolojika i Shina nadritra ny 30 taona. Jereo ny manodidina anareo, maro ireo andevo tandrefana. Ady fiarovana ao anatin'ny hakiviana izany, ady ara-kolotsaina tsy misy poa-basy.
Ny hafa kosa naneso ilay fandraràna
Ny fandrarana ny fety hafa no fomba hampiroboroboana ny fety nentim-paharazana. Hay ve e, tokony ho arahabaiko ve ianao satria tena maranin-tsaina ?
Vahiny tanteraka i Karl Marx , tokony hino azy ve isika?
Adinontsika ireo razambentsika satria mankalaza ny fety tandrefana isika? Tsy manana fahatokisan-tena firy ireo razambentsika sa efa very ny fahatsapany ny fisiany? Midika hoe “aorian'ny Jesoa Kristy” ny Anno Domini (AD) , tsy tokony hampiasaintsika intsony izany fa aleo mampiasa ny Taom-baovaon'ny Volana eo amin'ny toerany.
Tsy afaka mankalaza ny Krismasy miaraka amin'ny toetra sosialista Shinoa ve aho?
Mpikambana ao amin'ilay antoko aho, kanefa tsy mpikambana ao ny sipako. Te hanao Krismasy miaraka amiko izy, inona no tokony ataoko?
22 ora izayJapana